GV Face: Mitolona Ho Amin’ny Fisokafan’ny Aterineto Ao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2013 10:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, Español, English, Swahili, Português, English
Mitsinjo ny fahalalaham-pitenena ao amin'ny aterineto ve ianao? Manao ahoana ny fiainanao manokana anaty aterineto? Manao ahoana raha mamorona lalàna mety hiaro izany zo izany ny governemanta, fa tsy mandrahona azy?
Niasa nandritra ny taona maro ireo mpiaro ny zo nomerika breziliana mba hampandaniana ny lalàna Marco Civil da Internet, iray amin'ireo karazan-dalàna mety hahafahana miaro ireo zo sy fahalalahana ilaina amin'ny aterineto.
Nanome hery vaovao hitolomana ho amin'izany ireo fandaharan'asa fitsikilovana ataon'ny governemanta Amerikana, mandrisika ny fanohanan'ny fiarahamonim-pirenena ary hatramin'ny fanohanan'ny filoha ao Brezila, Dilma Rousseff.
Amin'ity herinandro ity ao amin'ny GV Face, hiresaka amin'ireo manam-pahaizana momba ny lalànan'ny aterineto ny mpisolovavantsika, tonian-dahatsoratra Ellery Biddle (@ellerybiddle), ka anisan'izany ireo mpanoratra ato amin'ny GV Raphael Tsavkko @Tsavkko, Carolina Rossini (@carolinarossini) ary Joana Varon (@joana_varon), mpanoratra ilay lalàna.